SONATA-CANTATA: နံပါတ်မှာ လေးဆယ့်လေး
မနက်ဖြန်ဆို ၄၅ ၀င်ပြီပေါ့နော် ။
အဲဒီ စာကြောင်းလေးကို အရမ်းသဘောကျတာပဲ ။ ချစ်သောသူများ နဲ့ နေ့သစ်မနက်တိုင်း ကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အတူနိုးထကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် မမသီတာ ။
ပျော်ရွှင်မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသော မွေးနေ့ရက်မြတ်ဖြစ်ပါစေ မမသီတာ။း)
လေးဂဏန်း မကြိုက်သူသော်လည်း ရှောင်လွှဲ၍ မရ... ကိုယ်တိုင် လေးဂဏန်းထဲ ရောက်နေသူတစ်ယောက်...ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရော စာရေးသူကိုပါ အားပေးရင်း လာဖတ်သွားပါတယ်...
ကျန်းမာ ချမ်းသာ ပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ် လေးဆယ့်လေး ဖြစ်ပါစေ သီတာ...
လေး ကတည်းက.. လေး နေတာတွေ... ငါး ကျရင်...ပြန်လွမ်းနေရလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့.. အဲ့ဒီ လေး ဂဏန်းကြီးကို ပွေ့ဖက်ကြရပြီလေ...
ကံကောင်းခြင်းတွေသယ်ဆောင်လာသော မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ မ ရေ. မနက်ဖြန် ဆို ၄၄ ကျော်သွားပြီလေ မ.
ရေးထားတာ ကြိုက်တယ်ဗျာ...စာလုံးတစ်လုံးချင်းစီမှာ ခွန်အားအပြည့် အနက်အပြည့်...
အေးဗျာ...တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့လည်း နီးတော့ နီးလာတာပါပဲ...ဘယ်နားနီးမှန်းသာ မသဲကွဲတာရယ်...
wow! very good post.
မမ happy birthday!
လေးဂဏန်းများအကြောင်းကို လေးစားစွာ လေးလေးနက်နက် ဖတ်သွားပါကြောင်း။ ညီမတို့လည်း မကြာခင် လေးဂဏန်း တွေနား ရောက်တော့မှာ ဖြစ်တာမို့ လက်တွဲခေါ်ပါဦး :D
အောက်တိုဘာလထဲမှာ ဘယ်နေ့မှန်းမမှတ်မိပေမယ့် မမသီတာမွေးနေ့ ရှိတာတော့ မှတ်မိတယ်
နောက်ထပ်မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်း နိုင်ပါစေ မမ :)
အနေတွေ နီးခဲ့လို့ ကိုယ်တို့ ဝေးရပြီ လို့ ဘယ်တော့မှ...